Efitra Atacama | Vaovao momba ny dia
Maria | | America, Shily
Raha mitady toerana mahagaga ianao izay mahatonga anao hahatsapa toy ny hoe any amin'ny planeta hafa ianao dia tokony mankany amin'ny Desert Atacama any Chile. Izy io no efitra maina indrindra tsy misy polar eto an-tany, na dia manana oasis izay loharanom-piainana aza izy io.
Rehefa mandeha any amin'ny Desert Atacama ianao dia tsy maintsy manana fandaminana sy lozisialy sasany. Noho io antony io, etsy ambany, dia hahita mpitari-dalana kely ianao amin'izay tokony ho fantatrao momba ny dia ataonao any amin'ity toerana Shiliana mahafinaritra ity.
2 Inona no fotoana tsara hitsidihana azy io?
3 Ahoana ny fomba hitodihana any amin'ny Desert Atacama?
4 Inona no jerena ao amin'ny Desert Atacama?
4.1 Lohasahan'ny volana
4.2 Lohasahan'ny fahafatesana
4.3 Céjar Lagoon
4.4 Salar de Atacama
4.5 Volkano Lascar
4.6 Tatio Geysers
4.7 Fitsidihana astronomikan'i Atacama
Izy io no vavahady mankany amin'ny Tany Efitr'i Atacama sy ny toerana izay safidin'ny mpandeha maro ho fototry ny asany. Eo amin'ny 1.700 kilometatra miala an'i Santiago de Chile no misy azy ary tato ho ato dia lasa fifantohan'ny mpizahatany tokoa izy io satria amin'ny manodidina azy dia misy toerana mahaliana toy ny Lohasahan'ny Volana, ny geysers Patio na ny National Reserve of the Flamingos. Na eo aza izany dia mbola tsy nangataka naoty iota izy.
Ao amin'ity tanàna ity dia misy karazany maro amin'ny resaka trano onenana. Na tranom-bahiny backpacker na hotely lafo vidy ho an'ny trano fandraisam-bahiny na safidy lafo vidy.
Saingy, na eo aza izany, San Pedro de Atacama dia manohy miaro zavatra iray izay mampiavaka azy manokana. Ny fandehanana mamaky ny arabe amboariny miaraka amin'ny adobe sy ireo akora mahazatra ao amin'ilay faritra, amin'ny misasakalina maraina, rehefa mitsangantsangana ny ankamaroan'ny mpizahatany, dia azontsika antoka fa tsy hohadinoinao. Ary, raha tsy manana ianao dia miandrasa milentika ny masoandro ary manjary miloko ny lanitra. Jereo sy talanjona amin'ny iray amin'ireo lanitra tsy mampino indrindra eto an-tany.
Inona no fotoana tsara hitsidihana azy io?
Azonao atao ny mandeha amin'ity faritry ny firenena ity mandritra ny taona fa mandritra ny fahavaratra (Desambra-martsa) dia avo ny hafanana ary amin'ny ririnina (Jona-septambra) dia mangatsiaka.
Ny torohevitro dia ny mitsidika ny Desert Atacama mandritra ny lohataona (aprily-mey) na ny fararano atsimo (oktobra-novambra). Amin'izany dia ho voalanjalanja kokoa ny mari-pana ary tsy ho mafana na hatsiaka ianao.
Ahoana ny fomba hitodihana any amin'ny Desert Atacama?
Soa ihany fa misy safidy maromaro azon'ny mpitsidika atao:
Manofa fitsangatsanganana iray: any San Pedro de Atacama dia misy masoivoho marobe mipetrapetraka mba hahafahanao mahita ilay mifanaraka amin'ny teti-bola sy antenainao indrindra.
Manofa fiara ianao: Raha ampitahaina amin'ny safidy teo aloha, ny fanofana fiara dia mamela anao hitsidika ny Desert Atacama miaraka amin'ny fahalalahana bebe kokoa ary hijanona isaky ny toerana raha mbola tianao izany.
Manofa bisikileta: ity safidy ity no atolotra indrindra ho an'ny mpitsangatsangana, ireo izay maniry ny mandeha mamaky ny Desert Atacama.
Inona no jerena ao amin'ny Desert Atacama?
13 kilometatra miala an'i San Pedro de Atacama no lohasahan'ny volana, tandindonin-tany efitra mahatsiahy ny fisehoan'ny volana. Eto ianao dia afaka mahita ireo endrika voajanahary manaitra toy ny amphitheatre, ny 3 marías ary ny dune lehibe.
Ny trangan-javatra voajanahary mitranga ao amin'ny Lohasahan'ny Volana dia noho ny fihaonan'ny efitra Atacama amin'ny tandavan-tendrombohitra Andes. Amin'ity toerana ity dia azonao atao ny manatrika fampisehoana ara-jeolojika kanto indrindra, indrindra amin'ny mangiran-dratsy sy amin'ny takariva. Avy amin'ny dune lehibe indrindra dia azo atao ny mankasitraka ny manodidina tsara tarehy amin'ity faritra ity.
Fantatra amin'ny anarana hoe Lohasahan'i Mars, ny Lohasahan'ny Fahafatesana dia eo afovoan'ny Cordillera de la Sal, 2 kilometatra monja miala an'i San Pedro de Atacama.
Mahazo an'io anarana io izy satria tsy misy karazana zavamaniry maniry eto ary tsy misy biby velona. Izay nanandrana namakivaky ny lohasaha dia maty tamin'ny andrana. Izany no antony iheverana azy io ho toerana tsy azo idirana indrindra eto an-tany.
Na izany aza, El Valle de la Muerte dia ankafizin'ireo izay tia manao sambo, mitaingina na mandeha mitaingin-tsoavaly satria akaiky an'i San Pedro de Atacama.
Manoro hevitra anao ny hitondra ny fakan-tsary miaraka aminao haka sary ireo sary vongana voajanahary sy vatom-pasika.
Izy io dia lagoon miaraka amina sira be dia be mitovy amin'ny Ranomasina Maty, izay mamela anao handro amin'ny fahatsapana fa tsy milentika ao anaty rano fotsiny. Any amin'ny 16 kilaometatra monja avy eo San Pedro de Atacama no misy ny farihy Céjar, eo afovoan'ny tontolo kanto misy loko turquoise sy volkano.
Ny filentehan'ny masoandro avy eo an-joron'ity Desert Atacama ity, miaraka amin'ny lokony sy ny lokony dia manome fahitana tsy mitovy amin'ny masontsika.
Ny Salar de Atacama dia iray amin'ireo manintona mpizahatany indrindra ao amin'ny Reserve National Los Flamencos. Miaraka amin'ny 3.000 km2 azy no tahiry sira lehibe indrindra any Silia ary ny fahatelo eto an-tany.
Ao amin'ny moron-dranomasiny dia miaina vorona Andean marobe toy ny flamingo mavokely any an-tendrombohitra avo.
Raha te hampihazakazaka ny fitsangantsanganana ianao ary misaintsaina ny iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra any an-efitra Atacama, dia mila mandeha mitsangatsangana mankany amin'ny lava-bolan'ny volkano Lascar ianao.
Mba hanaovana izany dia mila mankany Talebre ianao, ilay tanàna izay eo am-pototry ny volkano ary miditra amin'ny lalana mankany amin'ny lagoon Legía. Eto dia mendrika halaina sary koa ny tontolo.
Ny Tatio Geysers dia vondrona geysera sy mpifoka sigara 80 miorina amin'ny 4.200 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina any amin'ny Andes Mountains., noho izany dia vondrona fahatelo lehibe indrindra eto an-tany izy ary misolo tena ny 8% ny geyser manerantany.
Ireo geyser ireo dia 89 kilometatra miala an'i San Pedro no misy azy ireo ary vao maraim-be dia manolotra hetsika fumaroles etona novokarin'ny hafanan'ny hafaràn-dranomasina izy ireo. Voahodidin'ny havoana mahatratra 5.900 XNUMX metatra ny haavony.
Ao amin'ny manodidina dia misy dobo mafana izay azo atao ny mandro, ka ny mpizahatany maniry hanao izany dia afaka sahy mandro.
Fitsidihana astronomikan'i Atacama
Noho ny toetrany, ny Desert Atacama dia iray amin'ny toerana tsara indrindra eto ambonin'ny tany mandinika ny lanitra. Noho io antony io, mandritra ny fitsidihana dia azo atao ny manangona fitsangatsanganana astronomika amin'ny iray amin'ireo mpandinika maro izay misy eto.
Ny fizahan-tany astronoma ao amin'ny Desert Atacama dia misy faritra maromaro. Ohatra, lahateny savaranonando momba ny antokon-kintana sy kintana lehibe ho an'ny vao manomboka manaraka ny lanitra amin'ny alàlan'ny teleskaopy ary farany amin'ny adihevitra miaraka amin'ireo astronoma miaraka amina sôkôla mafana.
Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo drafitra tsara indrindra azo atao mandritra ny dia mankany amin'ny Desert Atacama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Efitra Atacama
Krabi, manontany tena any Thailand